Otu esi enweta ego na TikTok | Ozi ECommerce
Otu esi enweta ego na TikTok
TikTok bụ otu n'ime netwọkụ mmekọrịta mebiri emebi wee jisie ike kpọga ọtụtụ ndị na-akwado Instagram na netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ na mpaghara ya. N'ezie, ọ ga-ekwe omume na ọ bụ otu n'ime ndị na-anọgide dị ka a họọrọ ruo ogologo oge, karịsịa ebe ọ bụ na ọnọdụ na-eduga anyị na vidiyo karịa ihe oyiyi. Ma, Kedu ka esi enweta ego na TikTok? Enwere ike ime?
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche imepe akaụntụ na ịchọrọ ịma ma mbọ ị ga-enye nwere ụgwọ ọrụ ya, mgbe ahụ anyị ga-ekwu maka ya. Ị ga-ahụ ihe ị ga-enweta na netwọk mmekọrịta a.
1 TikTok, gịnị kpatara nlebara anya?
2 Otu esi enweta ego na TikTok: ụzọ dị iche iche iji nweta ya
2.1 Site na nlele vidiyo
2.2 Mgbasa ozi na ndụ
2.3 Bụrụ onye mmetụta
2.4 Ego TikTok
TikTok, gịnị kpatara nlebara anya?
Ihe a na-elekwasị anya, na ihe kachasị anọchite anya netwọk mmekọrịta a, bụ usoro ya. Ohere nke ịmepụta vidiyo na ịme ka ha na-agagharị agagharị emeela ka ọ bụrụ otu n'ime ihe kachasị pụta na eziokwu ahụ bụ na ndị na-ege ya ntị lekwasịrị anya, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-eche na ha bụ nanị ndị na-eto eto, bụ ndị ọrụ nke afọ ọ bụla.
Ihe ọtụtụ na-amaghị, ma ọ bụ opekata mpe na-erigbu n'ụzọ dị otú a, bụ nke ahụ Site na TikTok ị nwere ike nweta ego. Ee, site na vidiyo ndị emepụtara ị nwere ike nweta mgbakwunye na njedebe nke ọnwa. Ma gịnị bụ ihe mere o ji dọta mmasị dị ukwuu?
Na mbido, mgbe TikTok pụtara, a na-ahụ ya karịa ka netwọkụ mmekọrịta maka ndị nọ n'afọ iri na ụma ma ọ bụ ndị na-eto eto, ebe ọ bụ na ọtụtụ vidiyo ekesara bụ nke ndị mmadụ na-agba egwu, njakịrị, ọchị, wdg. Otú ọ dị, ka oge na-aga, ọ tụgharịrị gaa n'ụdị ọdịnaya ọzọ, nke ka njọ na nke bara uru. Ugbu a, ị nwere ike ịchọta ndụmọdụ nri, ntụziaka, ozi ahụike, wdg. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, o tozuola.
Ruo n'ókè ọtụtụ ụlọ ọrụ amalitela ime atụmatụ ịzụ ahịa iji ruo ndị na-ege ha ntị ma nweta ihe mgbaru ọsọ ha.
E wezụga inweta ihe ahụ niile, kedu ihe ị ga-agwa anyị ma anyị gwa gị otu esi enweta ego na TikTok?
Otu esi enweta ego na TikTok: ụzọ dị iche iche iji nweta ya
Anyị enweghị ike ịgwa gị na TikTok dị mfe ịkpata ego, n'ihi na ọ bụghị n'ezie. Ma ọ bụghị ihe na-agaghị ekwe omume, ma ọ bụrụ na ịmee atụmatụ dị mma, ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla ime ya.
N'ezie, Enweghị otu ụzọ isi nweta ego na TikTok, ma ọtụtụ, na ebe a anyị ga-atụle ha niile. Buru n'uche na ọtụtụ n'ime ha achọghị obere ndị na-eso ụzọ ma ọ bụ oge na akaụntụ ahụ ka ha nwee ike ịmalite ịkpata ego, ihe dị mkpa gbakwunyere na netwọk mmekọrịta ndị ọzọ enweghị.
Site na nlele vidiyo
Ihe mbụ ị ga - eme iji kpata ego na TikTok bụ bulite vidiyo. Ma ọ bụrụ na ị nwere chi ọma na otu n'ime ha na-aga viral, ị ga-enwe ike iji ya nweta ego. N'ezie, ọ gaghị adabere na ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ ị nwere, kama na echiche nke vidiyo ahụ.
Ego ole ka ị ga-enwetakwa? Ọfọn, eziokwu bụ na ọ gaghị abụ ihe ga-eme ka ị kwụsị ọrụ gị. A na-akwụ ihe dị ka cents 2-3 maka nlele 1000 ọ bụla, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ inwe ihe ịga nke ọma, ị ga-ejikwa bulite vidiyo kwa ụbọchị wee mee ka ọ ruo otu nde nlele iji nweta 20-30 euro kwa ụbọchị (nke ga-adị n'etiti euro 600 na 900 kwa ọnwa).
Nke a adịghị mfe, mana enwere profaịlụ na-enweta ya, yabụ naanị ị ga-achọta ha wee hụ ihe ha na-eme iji soro usoro na ọwa gị.
Mgbasa ozi na ndụ
Eziokwu ahụ na ị na-agbasa ozi ndụ agaghị eme ka netwọk mmekọrịta nye gị ego, dị anya site na ya. Mana ị ga-enweta ndị na-ahụ gị, ọ bụrụ na ihe ị na-eme masịrị ha, nye gị onyinye mebere. Ndị a na-enweta site mebere ego na onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịzụta, na ezigbo ego, mkpụrụ ego ndị ahụ o mesịrị "na-enye" ​​ndị na-eme vidiyo ndị dị ndụ.
Ozugbo ị nwetara ụgwọ ọrụ ahụ, TikTok na-enye gị ohere ịgbanwe mkpụrụ ego ndị ahụ na onyinye ma ọ bụ na ezigbo ego, nke ezitere site na Paypal.
N'ezie, iji nwee ike ịme vidiyo dị ndụ ị ga-emerịrị ihe dị mkpa achọrọ: nwee ihe karịrị 1000 ndị na-eso ụzọ. Ọ bụrụ na ịnweghị ha, ị gaghị enwe ike ịnweta uru ndị ahụ ma ọ bụ na ị gaghị enwe ike ịdị ndụ (ihe onye ọ bụla na-atụ aro ka ị nweta na obere oge).
Bụrụ onye mmetụta
Mgbe netwọk mmekọrịta na-amalite ịpụta, ịghọ onye mmetụta nwere ike ịdị mfe, n'ihi na ị nweghị asọmpi dị ukwuu. Nsogbu bụ na emesịa ọ na-esiwanye ike. Agbanyeghị, ọ bụ otu n'ime ụzọ isi kpata ego na TikTok n'ihi na ọ na-enye gị ụlọ ọrụ, azụmaahịa, ndị nkwado, wdg. ha na-ele gị anya na Ha chọrọ ịkwụ gị ego iji kpọsa ozi, ma ọ bụ naanị kwuo ụdị ha ma ọ bụ ngwaahịa ha na-ere.
N'ezie, ọ dị ezigbo mkpa inwe ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-eso ụzọ na echiche na vidiyo ebe ọ bụ na ihe ha chọrọ bụ iru ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ndị mmadụ.
Mara ihe ọ bụ? Ọ bụ ụzọ netwọk mmekọrịta nwere ka ị nweta ego site na ntinye aka. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, onye ọ bụla ị kpọrọ òkù ịbanye na iji koodu gị ga-enye gị ohere ịnweta ego ị nwere ike ịgbapụta na Paypal ma ọ bụ ọbụna tinye ya n'ụlọ akụ gị.
Ego ole ka ị na-enweta maka onye ọ bụla? Ọfọn na Spain ị ga-enweta otu euro maka ọkpụkpọ oku ọ bụla zutere wee banye ngwa ahụ, yabụ ọ bụrụ na ị nweta ọtụtụ ndị enyi ị nwere ike nweta ọnụ ọgụgụ dị mma na ngwa ahụ.
Ị nwere ọrụ a na profaịlụ nke gị, ma ị ga-eziga ndị enyi gị, ezinụlọ na onye ọ bụla chọrọ koodu ahụ pụrụ iche nke ga-eme ka ọ bụrụ na, mgbe ha budata ngwa ahụ ma mepụta akaụntụ ahụ, ị ​​nwere ike ịnweta ego ahụ.
Anyị enweghị ike ịgwa gị na TikTok ga-adị ruo mgbe ebighị ebi, ma ọ bụ na ọ ga-arụ ọrụ nke ọma iji nweta ego, mana nke bụ eziokwu bụ na ọ na-ekwe nkwa ndụ ọtụtụ afọ ebe ọdịnaya mmekọrịta, ya bụ, vidiyo, ghọrọ otu n'ime nke kacha eri.
Ị maara ụzọ ndị ọzọ ị ga-esi nweta ego na TikTok? Ị nwere ike ịgwa anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ahịa azụmahịa » Otu esi enweta ego na TikTok
Outbrain: kedu ihe ọ bụ
Gịnị bụ ika